Jabra J.Randall 45h, a zuru okè enyi maka teleworking [Nyocha] | Akụkọ akụrụngwa
Ọnụ ego ekwentị
Ọnụ ego Internetntanetị
Google m / O
Mininggwé ojii na-egwupụta
ndị na-agụ akwụkwọ
Jabra Elite 45h, onye zuru oke maka teleworking [Nyocha]
Miguel Hernandez | 01/05/2021 12:00 | Emelitere ka 29/04/2021 13:16 | General, Nyocha
Telework Ọ bụ ebe a ka ọ nọrọ ma ọ na-abanye n'ụzọ anyị si ahụ ihe, nke mere na ọtụtụ n'ime anyị ahọrọla ịtọlite ​​obere ọfịs n'ụlọ anyị ma anyị achọpụtala na ngwa dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị .
Jabra bụ ọkachamara na ịnye ngwaahịa na vidiyo mkparịta ụka maka ụdị ndị ọrụ niile na oge a anyị ga-elekwasị anya na ngwaahịa dị iche iche. .B.Anyị na-eleba anya na ekwe ntị Jabra Elite 45h, nke kachasị maka ịrụ ọrụ tele tele na ahụmịhe kachasị mma, chọpụta ha na anyị.
1 Akụrụngwa na imewe
2 Nka na ụzụ
3 Njikọta na obodo kwụụrụ
4 Qualityda dị mma na ahụmịhe onye ọrụ
5 Uche ederede
Akụrụngwa na imewe
Dịka ị maraworị, Jabra bụ ụlọ ọrụ na-arụkarị ngwaahịa nwere ụkpụrụ dị oke mma, ọ bụ otu ahụmịhe anyị hụrụ na nke a Jabra 45h. Banyere nkwakọ ngwaahịa, ụlọ ọrụ na-akụ nzọ mgbe nile na minimalism na a pụtara ulo oru unboxing usoro nke na-agwa anyị ihe ọ bụla. Ihe mbụ nke juru anyị anya mgbe anyị na-ewepụ ha n'igbe ahụ bụ oke ọkụ ha na etu esi ewuli ha ike, njirimara ndị a na-eso ha n'oge ojiji kwa ụbọchị. A ọma millimita ukpụhọde usoro enweghị creaking na na "n'elu-ntị" earmuffs na o siri ike ikesiike.
Akụkụ: 186 * 157 * 60,5 mm
Ibu ibu: 160 grams
Dị na agba: Black, Black + Ọla kọpa, Agba aja aja, Blue, Brown, Black + Space Gray
Ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga - eme ya na eziokwu ahụ bụ na e ji akpụkpọ anụ sịntetik mee ihe na padding bụ ebe nchekwa ụfụfụ, na indicative «L» na «R» perforated ozugbo na ha. Anyị nwere ngụkọta ịdị arọ naanị na gram 160, ihe na-eju anya, na-esonyere ya na njide ejidere ya. N'ezie, igbe ahụ na-eweta eriri USB-C nke a ga-eji na-ebuba ngwaọrụ ma dọọ obere sentimita 30 n'ogologo, nke emeela ka anyị nwee obi ilu na-eche na ekweisi onwe ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20 centimeters n'ogologo.
Nka na ụzụ
Anyị na-agakwuru onye ọ bụla na-ekwu okwu, ma aka nri ma aka ekpe nwere dayameta 40 millimeters, nke adịghị njọ ma ọlị. Ha abụọ nwere mkpuchi megide mkpọtụ ifufe nke ga-enyere anyị aka inwe mkparịta ụka ma gee egwu nke ọma ọbụlagodi na mpụga, ihe anyị gosipụtara na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Otu na-eme na mkpọtụ na oku, nwere igwe okwu abụọ na-elekọta iji meziwanye olu anyị ma si otú a jide n'aka na onye natara na-anụ nke ọma ihe niile anyị chọrọ ịpụ.
Bandwidth ọkà okwu egwu: 20 Hz ruo 20 kHz
Okwu bandwidth na-ekwu okwu: 100 Hz na 8000 Hz
Igwe okwu MEMS abụọ
Bluetooth na abụọ imekotaotuugbo pairings
N'ụzọ dị ịtụnanya, na n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-achọpụta na ngwaọrụ ahụ nwere akwụkwọ ikike afọ abụọ n'ihu mmiri na uzuzu na weebụsaịtị ha, ihe nke juru m anya. N'akụkụ a obere ihe nwere ike ịchọ teknụzụ nke Jabra 45h na-wuru nke elu-ike ihe dị ka adonized aluminum na silicone na-abụghị osisi mmanụ. Nke bụ eziokwu bụ na a na-enwe ekele maka ojiji a na-eji kwa ụbọchị maka nkwụsi ike nke ihe a niile na-enye.
Njikọta na obodo kwụụrụ
Njikọta ga-adabere na Bluetooth 5.0 na nke a, yana asambodo niile dị mkpa maka ebumnuche a. Profaịlụ Bluetooth dị mkpa mgbe ị na-ege egwu na ebe a anyị na-ahụ onwe anyị dị ka oké absentee ka Qualcomm si apt codec, Agbanyeghị, anyị nwere ụdị ndị ahụ sitere na Apple na ụlọ ọrụ ndị ọzọ: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2.
Igodo nke raara onwe ya nye iji kpọọ Alexa, Siri, Bixby ma ọ bụ Google Assistant.
Ma nnwere onwe, Anyị enweghị data ọrụ aka na ọkwa nke ike batrị na mAh. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ kwere anyị nkwa ruo oge 50 nke egwu, ihe anyị nwere ike ịchọpụta na ọ dị ezigbo nso na arụmọrụ ekweisi. Okwesiri ighota na ọdụ USB-C nwere ụdị "ngwa ngwa ngwa ngwa" nke ga - enye anyị ohere ka anyị jiri 10 awa kwụụrụ onwe anyị na nkeji iri na ise ịgba ụgwọ, ọ bụ ezie na ị na-atụle na oge ngụkọta oge na nkwụnye USB-C 5W bụ 1 awa na 30 nkeji, ọ dị ka ụgwọ ụgwọ ọkọlọtọ. Ha nwere "ọnọdụ ụra" nke a ga - arụ ọrụ na akpaghị aka iji melite arụmọrụ batrị mgbe anyị anaghị eji ha na mmechi akpaka mgbe awa 24 na-ejighị ya.
Qualityda dị mma na ahụmịhe onye ọrụ
Dị ka ọ na-adịkarị na ngwaahịa Shure, anyị na-ahụ isi dị mma nke ọma. Bass anaghị apụ apụ ma anyị nwere ike ịkọwa ọdịiche dị iche iche, ee, ọ bara uru ịkọwa na anyị enweghị ike ịchọ karịa ekweisi ndị ọzọ na ọnụahịa ya. N’ezie, ikike kagbuo ikike mkpọtụ nke ekweisi bụ ihe ịtụnanya na-eche na ha “karịrị ntị” ma ghara itinye ntị anyị kpamkpam.
Igwe okwu na-arụ ọrụ nke ọma maka mkparịta ụka ogologo oge, ha na-anọrọkwa n'èzí mkpọtụ nke nwere ike ịkwụsị ma ọ bụ kpaghasị oku ekwentị. Igweisi a nwere oke ọkụ na nnwere onwe obi ọjọọ nke na-eduga anyị ngwa ngwa iche na ha nwere ike bụrụ nnukwu nhọrọ mgbe anyị na-ekwu maka ịrụ ọrụ igwe. ma ọ bụ nọrọ ọtụtụ awa n'ọfịs n'atụghị ụjọ ịkpọ oku. Ha anaghị eme ka ike gwụ mmadụ na ntị ma ọ bụ n'isi n'ihi ibu na ngwa ha na-anọpụ iche na-eguzogide ọgwụ, ihe m chere na m kwesịrị igosipụta na nyocha a.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanahụ ekweisi TWS mgbe ị na-arụ ọrụ telefon ma ọ bụ jiri ụbọchị ọfịs na-enweghị ịhapụ oku ekwentị, Jabra Elite 45h ndị a bụ onyinye na-adọrọ mmasị na oke ọnụahịa asọmpi. Nwere ike ịzụta ha ihe na-erughị euro 99 na oge dị ka Amazon. Enweghị m ike ịkwụsị ma cheta na anyị enweghị kpoo na anyị nwere ike ịhapụ ha, yana eziokwu ahụ bụ na n'ihi ụfọdụ ihe m na-aghọtachaghị na ha kpebiri ime na-enweghị ọdụ ụgbọ mmiri Jack 3,5mm maka njikọ ọdịnala.
Ntụle nchịkọta akụkọ
4 akara kpakpando
Nyochaa: Miguel Hernandez
Ihe na: Mee 1 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 29 April 2021
Onye edemede: 90%
Onye edemede: 75%
Onye edemede: 80%
Portability (nha / ibu)
Onye edemede: 95%
A na-eguzogide ọgwụ ma dị ezigbo mma
Mara ụda nke ọma
Ọnụahịa dị oke ọnụ
Bọtịnụ nwere njikwa siri ike
30cm USB-C USB
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Jabra Elite 45h, onye zuru oke maka teleworking [Nyocha]
Fresh´n Rebel Duo Base, imewe na ntụgharị na ikuku na-akwụ ụgwọ
Imeri Star Wars PS4, DVD na ihe egwuregwu. Soro ma nweta WinX DVD Ripper n'efu
Anata ndị ọhụrụ ozi ọma banyere nkà na ụzụ na Mgbakọ na email gị